१ God "भगवान विवरण" को बाथरूम सजावट, सही काम गर्नुहोस्, कामका लागि आधा बचत गर्न सक्नुहुन्छ
घर / ब्लग / बाथरूम सजावट १ “" भगवान विवरण "को, सही कुरा गर्नुहोस्, कामहरू आधा बचत गर्न सक्नुहुन्छ
बाथरूम सजावट १ “" भगवान विवरण "को, सही कुरा गर्नुहोस्, कामहरू आधा बचत गर्न सक्नुहुन्छ
2021 / 04 / 22 वर्गीकरणब्लग 4801 0
नयाँ बाथरूम नेटवर्क बाथरूम शीर्षकहरू
यो भनिन्छ कि सुनको भान्छा र चाँदीको बाथरूम। धेरै व्यक्तिको घरको सजावट, बाथरूमको महत्व यति उच्च छैन। र वास्तवमा भन्ने हो भने, बाथरूम त्यस्तो स्थान हो जुन हामी दैनिक रूपमा प्राय: प्रयोग गर्छौं, र यस प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदैनौं वा त्यसमाथि बढी पैसा खर्च गर्दैनौं। यी १ small साना विवरणहरूको बाथरूमको बारेमा, तपाईंले जान्नु आवश्यक छ!
बाथरूम स्थापना नल तान्न सकिन्छ, बिल्कुल कपाल OCD नुहाउन मायालु सुसमाचार हो। सामान्यतया पानी बाहिर प्रतिस्थापन गर्न धेरै स्विच हुन सक्छ। यो बाथरूममा नुहाउने टाउको जस्तो कार्य हो। आफ्नो कपाल धुनुहोस् तान्नुहोस्, प्रयोगमा नहुँदा पछाडि राख्नुहोस्। बिहान काममा जान हतारमा, तपाईं सबै पानी माथि प्राप्त गर्न नुहाउन खोल्नु पर्दैन।
ढोका भण्डारण सफाइ उपकरण पछाडि
बाथरूमको ढोकाको पछाडि सफा उपकरणहरू भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ, विशेष भण्डारण क्याबिनेटको तुलनामा धेरै सरल र अधिक लागत प्रभावी हुन्छ। जब तपाईं ढोका खोल्नुहुन्छ, यसले ढोकाको सुन्दरतालाई असर गर्दैन। सफा उपकरणको भित्तामा ह्या hanging्गिंग पनि राम्रोसँग सूखा र सुख्खा हुन सक्छ, गन्ध पैदा गर्दैन। बाथरूममा सीधै सफा गर्न सकिन्छ, गतिको छोटो लाइनहरू।
कपाल ड्रायर शेल्फ
कपाल ड्रायर सिधा काउन्टरटपमा हुँदैन, नेल-फ्रि अलल्फबाट भण्डार गर्न सकिन्छ, प्लग टच वाटर घटाउन कोइल्सले छनौट गर्न सिफारिस गरिन्छ। र सब भन्दा राम्रो यो सार्वभौमिक मोडेल हो, विभिन्न प्रकारका हेयर ड्रायरहरू राख्न सकिन्छ। रंग संयोजन केवल उच्च मूल्य मात्र हो, तर एक्सेन्ट गर्न बाथरूम पनि दिन सक्दछ।
बाथरूम क्याबिनेट overhang 30 सेमी
बाथरूम क्याबिनेट ओभरह्या 30 cm० सेमी, एक सानो खाली छोड्दा सफा गर्न, तल पनि भण्डारण टोकरीहरू, आदि राख्न सक्दछ, समग्रमा पनि भारी हुँदैन। निस्सन्देह, यदि तपाईं त्यसो गर्नुहुन्छ भने, बाथरूमको निकास पर्खाल प do्क्ति गर्नको लागि उत्तम हो, तल साघुँरो डाउनपाइप देखा पर्दैन।
भिजेको र सुख्खा बिछोड
बाथरूम जापानी चार बिभिन्न गर्न सक्दैन, तर पनि भिजेको र सुक्खा अलग गर्न राम्रो छ, ताकि धुने र शौचालय एक अर्कामा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यदि घरमा धेरै मानिसहरू बस्छन् भने, यो गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
स्मार्ट शौचालय महँगो छ, तर ती सबै भन्दा प्राविधिक रूपमा उन्नत छन् र उपलब्ध उत्तम शौचालयहरू।
बाथरूममा भण्डार गर्ने ठाउँ बढाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो विशेष गरी अल्ट्रा-साना बाथरूमहरूका लागि। कसरी सजावट गर्दा दुई कोठा जोड्ने बारेमा। यस तरिकाले शैम्पू, शावर जेल, अनुहार धुने, आदि तल राख्न सकिन्छ। आलाको मध्य ईंटवर्क वा पर्यावरणीय काठ हुन सक्छ। जब यो ठीक हुन्छ, यसलाई अलिकता बाहिर तिर स्लट गर्नुहोस् ताकि पानी जम्मा हुँदैन।
शौचालय स्प्रे गन
शौचालय लान्स शौचालय मात्र होइन, तर बाथरूमको भित्ता र भुइँ सफा गर्न पनि उपयोगी छ। किनभने फ्लशिंग शक्ति महान छ, यो एक फ्लशमा सफा गर्न सकिन्छ, गृहिणीलाई आधा प्रयास बचत गर्दै।
एक स्नान स्लिपर भण्डारण क्षेत्र सेट अप गर्नुहोस्
बाथरूम स्नान क्षेत्रमा स्लिपर भण्डारण क्षेत्र सेट अप गर्न सम्झनुहोस्, तर यो सप्पललाई सिधा ठाउँमा राख्नु हुँदैन। यो नुन मात्रै हो, तर यो गडबड पनि देखिन्छ। भित्तामाउन्ट गरिएको स्लिपर र्याक छनौट गर्नुहोस् प्रत्येक स्लिपरलाई सुक्खा र समयमै स्वास्थ्यकर राख्न।
पोर्शिलेन गोंद गिलास ग्लुको सट्टा
शौचालयको आधार र जमिनको दूरी गिलास गोंदमा सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ, र गिलास गोंद समय अवधि पछि मोल्डी हुनेछ। पोर्सिलेन ग्लू कसरी प्रयोग गर्ने बारेमा, मूल्य सस्तो छ र मोल्ड हुँदैन। गिलास गोंदको तुलनामा पनि बारम्बार मोल्ड हटाउन आवश्यक छ, तर यसले धेरै समय र लागत प्रभावी पनि बचत गर्दछ।
स्नान र निकास प्रशंसक भन्दा दुवै शक्ति क्षेत्र हीटर बढी शक्तिशाली छ, दुबै निकास भेन्टिलेसन समारोह, तर ताप, डिहूमिडिफिकेशन, जाडो हीटिंग। घरका बच्चाहरूका लागि पहिलो छनौट पनि लुकाउन सक्दछ।
साँघुरो रद्दी टोकरी सक्छ
संकुचित बाथरूमहरूको लागि, खुला रद्दी टोकरीहरू छनौट नगर्न सिफारिस गरिएको छ, जुन धेरै भीडले देखिने छ र यसको गन्ध पनि हुनेछ।
शौचालय प्रयोग गर्दा सधै असहज महसुस गर्नुहोला, तपाईसँग शौचालयको मल नहुन सक्छ। शौचालय प्रयोग गर्न सजिलो मात्र होइन, यसले कब्ज पनि कम गर्दछ। घरमा बच्चाहरू छन्, शौचालय मलले बच्चाहरूलाई ओह शौचालय सिक्न मद्दत गर्न सक्छ।
डबल रोल शौचालय कागज धारक
यदि तपाईंसँग ठूलो परिवार छ भने, यो एक डबल रोल शौचालय कागज धारक प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो भोल्युम सामान्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र स्पेयरको एक मात्रा, अचानक कागज बाहिर बाथरूमको अप्ठ्यारोबाट बच्न।
जादुई पानी स्क्रेपर स्वीपर
लामो अवधिमा सफा र व्यवस्थित राख्न बाथरूमको भुइँ सजिलो छैन, र जादू स्क्र्रापर सफाकर्सको साथ, यो सबै सुपर सजीलो हुन सक्छ। यो दैनिक स्नानगृह हो वा पानीको साथ बाथरूमको भुइँ, एक स्क्र्यापको साथ पानी स्क्र्यापिंग स्वीपर लिनुहोस्। प्रभाव एक एमओपी भन्दा राम्रो छ, तर पानी को निशान।
धेरै घरहरू, बाथरूमको ढोका खाली छ, ठाउँ खाली भएको छ। वास्तवमा सफाई उपकरणहरू कहिले पनि भण्डारण हुन सक्दैन।
अघिल्लो :: विश्वको पहिलो! एक सुरक्षित र उपयोगी सिट-इन बाथटब, ताकि तपाईं आफ्नो स्थानमा "नुहाउन" सक्नुहुन्छ